Tag: keyword | Martech Zone
Monday, May 6, 2019 Chishanu, May 10, 2019 Kory Grushka
Wese munhu anoziva kuti PowerPoint ndiwo mutauro webhizinesi. Dambudziko nderekuti, akawanda madhishi ePowerPoint haasi chimwe chinhu kupfuura akateedzana akawandisa uye anowanzo kuvhiringidza masiraidhi anoteedzana neap-inducing soliloquies nevaratidziri. Zvatakakura zviuru zvemharidzo, taona akanakisa maitiro ari nyore, asi asinganyanyo shandiswa. Kusvikira izvozvi, isu takagadzira Center yeGravity, chimiro chitsva chekuvaka mharidzo. Pfungwa ndeyekuti dhiketi rega rega, yega slide, uye chidimbu cheese chemukati
Maitiro Ekubata Ako Veruzhinji Vatauri
Chitatu, October 10, 2018 Chitatu, October 10, 2018 Douglas Karr
Iyi posvo yandaifanira kunge ndakanyora pamusoro pegore rapfuura, asi ndakakurudzirwa kuinyora manheru ano mushure mechiitiko chandataura. Gore rakapera, ndakaenda kuRapid City, South Dakota ndokutaura kuConcept ONE, chiitiko chekutanga chekushambadzira bhizinesi chakatangwa naKorena Keys, muzvinabhizimusi wedunhu, muridzi wesangano, uye anodada neSouth Dakotan. Chinangwa chaKorena chaive chekuunza vatauri vehunyanzvi kubva kunze kwenyika vaigona
Chipiri, Gunyana 28, 2014 Chipiri, Gunyana 28, 2014 Douglas Karr
Kutaura nyaya ndiko kutsamwa kwese izvozvi mune zvemukati zvekushambadzira nyika. Yaivewo nyaya yekukurukurirana paContent Marketing World 2014 uko Kevin Spacey akaita hurukuro ... pakurondedzera nyaya. Mr. Spacey vakafamba kuburikidza nezvinhu zvitatu zvekutaura kukuru kwenyaya. Ini ndawedzera zvandinotaura pano - unogona kutarisa vhidhiyo yezita rake guru (iro rakanyatsogadziriswa kuti richeke muunganidzwa wezvekufumura). Kukakavara - Bhizinesi rako rinogona
Ongororo dzako Dzatadza Kuratidza
Mugovera, Mbudzi 6, 2010 China, January 16, 2020 Douglas Karr
NeChishanu, ndakataura kuEEDEV, musangano wevadzidzisi veYunivhesiti nematare ekushambadzira, nezve kushandiswa kweAnalytics. Vazhinji vevateereri vanoshandisa Google Analytics, saka mharidzo yacho yakachinjirwa iyo. Panzvimbo pekuita imwe mharidzo inofinha paGoogle Analytics, ini ndaida kupa vateereri nenjodzi yeiyo yavo analytics application yaishayikwa uye ndeapi mamwe maturusi aive kunze uko ekuzadza mipata. Maturusi andakareva
Ndakaita hurukuro neimwe shamwari nhasi uye ndakawana email kubva kune mumwe achibvunza rairo yangu pamaitiro ekuvaka yavo yemhando ... uye pakupedzisira kuwana purofiti mairi. Iyi inogona kunge iri nyaya inopindurwa zvirinani neshamwari Dan Schawbel, nyanzvi yekumaka ... saka tarisa kublog rake. Ini ndichagovana pfungwa dzangu pane zvandakaita mumakore gumi apfuura, zvakadaro. Zvipe pachako kuti unoshuvira kuti uonekwe sei - ini